Semalt वेब सेवाहरु
यदि तपाईं सहि एसईओ र एनालिटिक्स कम्पनीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सहि ठाउँमा आउनुभएको छ। 63 636,471१ भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू र १,,72२,583। विश्लेषण गरिएका वेबसाइटहरूसँग, Semalt ग्राहकहरू समीक्षाको साथ सन्तुष्ट छन्। तर हाम्रो पाठकहरूको लागि जो SEO र वेब विश्लेषणको अर्थ बुझ्न सकेका छैनन्, तपाइँ वरिपरि रहनु पर्छ।
Semalt, एक अग्रणी SEO र एनालिटिक्स वेबसाइटमा स्वागत छ। हामी कुनै पनि नियमित मिकी माउस कम्पनी छैनौं जुन तपाईंको हार्ड-अर्जित पैसाबाट पैसा कमाउने लक्ष्य राख्छ। यसको सट्टामा, हामी पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी छौं। तपाईं हाम्रो अनुभवी र पेशेवर सदस्यहरूको टोलीलाई पनि भेट्नुहुन्छ।
हाम्रो टोलीका सदस्यहरू SEO र वेब विश्लेषक विशेषज्ञहरू हुन् जुन तपाईंको सबै आवश्यकताहरूमा जहिले पनि सहभागी हुन तयार हुन्छ। तपाईं उनीहरूलाई भेट्न र तिनीहरूसँग कुरा गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्दछ। तिनीहरू प्रतिभाशाली, सक्रिय र प्रेरित कामदारहरू हुन् जसको पोर्टफोलियोमा धेरै आईटी परियोजनाहरू छन्। तपाईंले टर्बो, Semalt प्रतीक, र हाम्रो कार्यालयको कछुवा पाल्तु जनावरहरूलाई पनि भेट्नु पर्छ।
यदि तपाईं अझै सोच्दै हुनुहुन्छ हामी वास्तवमै के गर्छौं भने, यहाँ एक विवरण छ।
Semalt ले एसईओ र एनालिटिक्स वेबसाइट सेवाहरू प्रदान गर्दछ हाम्रो ग्राहकहरूको लागि उत्पन्न गर्न र नेतृत्व गर्न। हामी वेबसाइटहरूको विश्लेषणको लागि अगाडि जान्छौं र सुनिश्चित गर्दछौं कि ती नेतृत्वहरू ग्राहकहरूमा परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले हो, हामी तपाईंलाई इन्टर्नेटको प्रयोग गरेर ग्राहकलाई आफ्नो व्यवसायमा आकर्षित गरेर पैसा कमाउन सहयोग गर्दछौं।
इन्टर्नेट मार्केटिंगमा, क्लाइन्टहरू जसले एसईओ प्रयोग गरेर फाइदा लिएका छन् सामान्यतया एसईओ चट्टानहरू जस्तो बयान गर्छन् !!! र यहाँ पनि छ
SEO र वेब एनालिटिक्सको महत्त्व बुझ्दै
SEO खोज ईन्जिन अनुकूलन को अर्थ हो। यो एक जैविक तरीका तपाईंको वेब सामग्री गूगल द्वारा क्रमबद्ध छ। धेरै पटक, प्रयोगकर्ताहरूले विज्ञापन वा विज्ञापन कसरी पोस्ट गर्दछन् भनेर इन्टरनेटमा पोस्ट गर्दैनन्। Billion अरब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू र १. billion अरब वेबसाइटहरूको बजार स्थान कल्पना गर्नुहोस्। हो, यी सबै वेबसाईटहरूले समान सेवा प्रदान गर्दैन, तर फेरि कुनै पनि अनौंठो छैन। जे भए पनि तपाइँ गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ अर्को वेबसाइटले यस्तै प्रकारको प्रस्ताव राख्दै छ। त्यसोभए, तपाइँका उत्पादनहरू मान्यता प्राप्त सुनिश्चित गर्न, हामी SEO प्रयोग गर्दछौं।
तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कहिलेकाँही Google मा उत्पादन र शीर्षक खोज्न को लागी जानुहुन्छ, तर तपाईले पृष्ठहरूको प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुन्छ? म पक्का छु कि तपाईंसँग छ, तपाईंलाई यसको उत्तर आवश्यक पर्दैन।
यद्यपि गुगलले तपाईको खोज परिणामहरुलाई एक विशेष क्रम मा व्यवस्थित गर्दछ। अब, त्यो भाग्य होइन, यो एसईओको प्रभाव हो। आज धेरै जसो इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् उनीहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तर फेला पार्छन् पहिलो पाँच खोज परिणामहरूमा। यसको मतलव यो छ कि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले सायद पनी अन्य पृष्ठ visit-7 परिणामहरू पहिलो पृष्ठमा भ्रमण गर्दछन्। त्यसो भए, दोस्रो पृष्ठमा खोज परिणामहरूको वा सोच्नुहोस्। के तपाईले केहि खोज्नु भएको छ र तेस्रो पृष्ठमा जानु छ? यसले SEOs को प्रभावकारिता प्रयोग गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँदछ।
एक व्यवसाय मालिक वा एक वेबसाइट को रूप मा, तपाईं सकेसम्म धेरै यातायात उत्पन्न गर्न चाहानुहुन्छ किनकि अधिक क्लिकहरु को लागी अधिक पैसा को अर्थ छ (स्पष्ट)। त्यसोभए जब तपाइँको वेबसाइट वा सेवाहरू पहिलो तीन खोज परिणामहरूमा देखा पर्दछ, तपाइँलाई थाहा छ कि यो ठूलो कुरा हो। यसैले तपाईं हामीलाई चाहिन्छ।
Semalt ले तपाईंलाई फूड चेनको शीर्षमा राख्दछ, तपाईं पहिले देख्नुहुनेछ। यो गर्नका लागि, हामी कुञ्जी शब्द र व्यापक वेब विश्लेषणको प्रयोग गर्छौं। जे होस् किवर्डहरू इन्टरनेटको जादु शब्द हो, तपाईंलाई अझै पनि प्रयोगकर्ताहरू क्लिक गर्न, पढ्न, वा अर्डर गर्न वेब व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ। यी कारकहरूले गुगललाई मद्दत गर्दछन्, र अन्य खोज ईन्जिनहरूले तपाईंको सामग्री छिटो फेला पार्न सक्छन् जब कुनै प्रयोगकर्ताले तपाईंको नजिकबाट सम्बन्धित केहि पनि खोजी गर्दछ।
त्यसोभए, यदि प्रयोगकर्ताले कहाँ जुत्ता किन्ने भनेर खोजिरहेको छ भने गुगलले तुरून्त वेबसाइटहरूमा कुञ्जी शब्दहरू खोज्दछ, तर उचित वेबसाइट बिना नै प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको साइटमा किनमेल गर्न कष्ट दिदैनन्।
यहाँ Semalt प्रदान गर्ने सेवाहरूको सूची छ
यस प्रकारको एसईओ छोटो समयमा ठूलो परिणाम ग्यारेन्टी गर्दछ। यो एसईओ प्याकेज तपाईको अनलाइन व्यापारको लागि पूर्ण घर प्याकेज हो।
यसले तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता बढाउँछ
तपाइँ अन-पृष्ठ अनुकूलन प्राप्त गर्नुहोस्
हामी लिंक निर्माण प्रदान गर्दछौं
विस्तृत कुञ्जी खोज अनुसन्धान
वेब विश्लेषक रिपोर्टहरू
एक अद्भुत वेबसाइट सिर्जना गर्न यो यातायात उत्पन्न गर्न सबै लाग्छ। यदि तपाईंसँग गुगलमा शीर्ष स्थानमा यसलाई कसरी ड्राइभ गर्ने ज्ञानको अभाव छ भने, यसले महत्त्वेपूर्ण ठान्छ। केवल $ ०.99 of को मूल्यको लागि, तपाईं एक एसईओ अभियान शुरू गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई एक फाइदामा राख्दछ। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको शुरुआतको रूपमा पनि हामी तपाईंलाई ती सबै चीजहरू प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंले आफ्नो वेबसाइट अनलाइन प्रमोट गर्न आवश्यक पर्दछ। हामी तपाईंको प्रोजेक्टहरूको लागि सेतो टोपी एसईओ टेकनीकहरूको यो सेटमा पहुँच प्रदान गर्दछौं। वा, तपाईं हाम्रो अद्वितीय प्रविधिमा आधारित एसईओ सेवाहरू प्रदान गरेर तपाईंको ग्राहकको राम्रो ग्राहक अनुभवहरू पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ। किफायती अटो एसईओ तपाईंको लागि काम गर्न दिनुहोस् र छिटो परिणामहरू प्रदान गर्दछ र १००% प्रभावकारिता।
यो प्रस्ताव को हो?
अटो एसईओ वेबमास्टरहरू, साना व्यवसाय वा स्टार्टअपहरू, कम्पनीहरू, र स्वतन्त्रकर्ताहरूको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ।
यो एक उन्नत एसईओ टेक्निक हो जुन तपाईंको व्यवसायको सफलताको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले तपाईंलाई गुगलको शीर्षमा पुर्‍याउँछ।
यो प्याकेज प्रदान गर्दछ:
वेबसाइट त्रुटि फिक्सिंग
समर्थन र परामर्श
कुनै पनि व्यवसायको लक्ष्य उत्तम हुनु पर्दछ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको कम्पनी फोर्ब्सको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी सूचीमा देखा पर्दै छ। विचारलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्; यो तीन महत्त्वपूर्ण चीजहरूको बिक्री, नाफा, र साझेदारीको साथ सम्भव छ। यी तीन प्रमुख सामग्रीहरू भनेको तपाईंलाई व्यवसायको संसारमा बाँच्नको लागि चाहिन्छ।
फुलसेओले तपाईंलाई सबै तीन तत्वहरू मिश्रण गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई समृद्धिको लागि एक सुरुआत दिँदै। हाम्रो एसईओ पेशेवरहरु को टीमहरु खोज इंजन अनुकूलन र वेब पदोन्नति को लागी एक विशेष योजना को लागी विकसित गरी लागू गर्दछ जुन तपाईको व्यवसाय आवश्यकताहरु लाई मिल्छ। हाम्रो मद्दतको साथ, तपाइँको कर्पोरेट साइटले पहिलो पृष्ठ मात्र होइन Google को जैविक खोजीमा शीर्ष स्थानमा लिनेछ। जब कुनै व्यक्ति तपाइँको प्रस्ताव को जस्तै कुनै उत्पादन को लागी हेर्नुहोस्, हामी तपाइँको साइट मा ड्राइव गर्नेछौं।
Semalt FullSEO बाट कसले फाइदा लिन्छ?
जबकि हाम्रो फुलसेओ प्याकेज मुख्यतया ब्यापार प्रोजेक्टहरू र ई-वाणिज्यका लागि डिजाइन गरिएको छ, यो स्टार्टअप मालिकहरू र वेबमास्टर्सका साथसाथै उद्यमीहरूका लागि लाभदायक छ जुन उनीहरूको वेबसाइटहरू धेरैजसो बनाउन चाहन्छन्।
Semalt वेब एनालिटिक्स
हामी तपाईंको वेबसाईटहरूलाई विश्लेषण गर्दछौं र तिनीहरूलाई सम्भव छोटो समयमा गुगलको शीर्ष १० मा लैजान्छौं। Semalt कीवर्ड रैंकिंग र चेकर्सको उपयोग गरेर, तपाईं अन-प्रवृत्तिमा रहन सक्नुहुन्छ।
हामी सेवाहरू प्रदान गर्दछौं:
तपाइँको वेबसाइट रैंकिंग जाँच गर्दै
वेबमा तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता अनावरण गर्दै
प्रतिस्पर्धा गर्ने वेबसाइटहरूको अन्वेषण गर्दै
पृष्ठ अनुकूलन गल्तीहरू पहिचान गर्नुहोस्
विस्तृत वेब रैंकिंग रिपोर्टहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
के तपाइँ शीर्षमा पुग्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर यसले कार्य गरिरहेको छैन? तपाइँको लक्षित दर्शकहरु तपाइँको वेबसाइट खोज्दै छैन? तपाईंको वेबसाइट विश्लेषण र परीक्षणको लागि हाम्रो निःशुल्क Semalt वेब एनालिटिक्स प्रयोग गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तरहरू प्राप्त गर्नुहोस्। हाम्रो अनलाइन वेब कीवर्ड रैंक परीक्षकले पनि Google SERPs मा तपाईंको वेबसाइट स्थिति देखाउँदछ। यस पछि, हामी कुञ्जी शब्दहरू सुझाव दिन्छौं जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। व्यक्तिले के खोज्छन् खोज्नुहोस् र तिनीहरूलाई चाहिएको कुरा बताउनुहोस्। तपाइँको प्रतिस्पर्धा अनुगमन गरेर, हामी सफलता को लागी उनीहरुका रहस्यहरु पत्ता लगाउँछौं। त्यस पछि हामी तपाईको अनलाइन प्रमोशनको लागि यो नयाँ ज्ञान परिमार्जन र प्रयोग गर्छौं।
अन्तमा, हामी विस्तृत वेब रिपोर्टहरू उत्पन्न गर्छौं र त्रुटिहरू समाधान गर्न मद्दत गर्छौं जुन हामीले देख्यौं। वेब गुरुको रूपमा, हामी तपाईंलाई र तपाईंको वेबसाइटलाई धनी बन्न मद्दत गर्दछौं।
Semalt वेब एनालिटिक्सबाट कसले फाइदा लिन्छ?
हामी प्रत्येक व्यक्तिको लागि सिफारिश गर्दछौं जुन उनीहरूको वेबसाइटबाट अधिक फाइदा लिन चाहन्छ। वेबमास्टरहरू, साना व्यवसाय मालिकहरू, कम्पनीहरू, स्टार्टअपहरू, र स्वतन्त्रकर्ताहरू पनि यो सेवा प्रयोग गर्न सक्दछन्।
हामी कुनै पनि उद्योग र प्रयोगकर्ताका लागि आश्चर्यजनक वेबसाइटहरू सिर्जना गर्दछौं। हामीले सिर्जना गरेका साइटहरू अनलाइन सबै कुराको लागि डिजिटल मुख्यालय बन्न सक्दछ, अनलाइन कम्पनीहरू, निजी व्यवसायहरू, र पसलहरू, वा सिर्जनाकर्ताहरू, कलाकारहरूको लागि स्टूडियोहरू, अन्य सबै प्रयोगकर्ताहरू जसले उनीहरूसँग इन्टरनेटमा आवाश्यक हुन्छौं। तपाइँ हाम्रो योग्य सेवाहरु लाई ध्यान दिन लायक प्राप्त गर्न को लागी भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको वेबसाइट उपस्थिति तपाइँको उत्पादन को बारे मा धेरै भन्छ। छविहरू, र ,हरू, र डिजाईनले महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईंको ड्रेसिंगले वास्तविक जीवनमा गर्दछ। एक अपील गर्ने वेबसाइट को निर्धारण कारक हुन सक्दछ जो तपाईंको वेबसाइटको सामग्री हेर्न को लागी बस्छ।
हाम्रो वेब विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दछ:
आकर्षक र कार्यात्मक डिजाइन
CMS समाधानहरू कार्यान्वयन गर्दै
चिकनी प्लगइन एकीकरण र एपीआई
समर्थन र रखरखाव
Semalt वेब विकास योजनाबाट कसले फाइदा लिन सक्छ?
वेबमास्टरहरू, साना व्यवसाय मालिकहरू, कम्पनीहरू, स्टार्टअपहरू, र स्वतन्त्रकर्ताहरूले यो जाँच गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्दछ।
साधारण चीजहरू लिनुहोस् र तिनीहरूलाई असाधारण बनाउनुहोस्। हामी तपाईंको विचारहरू, जीवन, गति, आवाज, र कार्यहरू दिन्छौं।
हामी तपाईंको अवधारणाको विकास गर्दछौं
लिपि उत्पादन गर्नुहोस्
व्यावसायिक आवाज कभर प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईलाई के प्रस्ताव छ दर्शकहरूलाई नबताउनुहोस्, यो देखाउनुहोस्। तपाईंको प्रतिस्पर्धा अगाडि हुन, तपाईं बाकस बाहिर सोच्न आवश्यक छ। तपाईंको प्रतिद्वन्द्वीले विचार गर्न सक्ने भन्दा बढी केही गर्नुहोस्। हाम्रो मद्दतको साथ, तपाईंसँग अद्भुत सहयोगी भिडियोहरू छन् जुन निस्सन्देह तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई प्रभावित गर्दछ। हामीलाई तपाईंको विचारहरू बताउनुहोस् र हामीलाई प्रोमोशनल भिडियोमा रूपान्तरण हेर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्ना क्लिकहरू ग्राहकमा बदल्नको लागि प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोहरूले तपाईंको सेवाहरू कुराकानीको लागि चाखलाग्दो तरीका बनाउँदछ। तपाइँले छोटो अवधिमा धेरै धेरै भन्नुहोस् र उनीहरूलाई तपाइँको ब्रान्ड सम्झन दिनुहोस् जब तिनीहरूले तपाइँका साथीहरूसँग तपाइँका भिडियोहरू साझा गर्छन्। तपाईं गुणस्तर वर्णन भिडियोको कारण नि: शुल्क मार्केटि enjoyको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
एक दिन, यो हामीलाई भयो कि कुन कुराले हाम्रो व्यवसायलाई अरूको लागि काम गर्न मद्दत पुर्‍यायो। हामी तपाईंलाई ब्रान्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछौं, र हामी यसलाई वेबमा बढावा दिन्छौं। हामीलाई थाहा छ कि हामी सबै आफैले धेरै चीजहरू गर्न मन पराउँछौं, तर केहि कामहरू पेशेवरहरूको लागि छोडिनु पर्छ। हामीलाई हाम्रो काममा तपाईं अचम्मका नतीजाहरू दिनुहोस्। वर्षौंको अनुभवको साथ तपाईले केकको सही टुक्राहरू प्राप्त गर्नुभयो चुनौतीहरूको सामना नगरी हामीले हाम्रो नुस्खा समायोजन गर्ने सामना गर्नुभयो। हामी व्यावसायिक रूपमा वेबमा तपाईंको वेबसाईटहरूको प्रमोशनको लागि रणनीति निर्माण र विकास गर्ने छौं।
यो हामी पूर्ण स्ट्याक डिजिटल सेवाहरूको रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं।
हाम्रो ग्राहकहरू सँधै सन्तुष्ट हुन्छन्, र उनीहरूले हामीलाई अद्भुत कथाहरूका साथ छोडिदिनु पर्छ जुन उनीहरूको वेबसाइट, जुन पहिले कहिँ फेला परेन, अब शीर्ष साइटहरू मध्ये एक स्थानमा छन्। यदि तपाईं अधिक हेर्न चाहानुहुन्छ, यी केसहरू यहाँ फेला पार्न सकिन्छ ।
Semalt सबैको लागि खुला छ, तपाईले बोल्ने भाषालाई ध्यान दिएर। हाम्रो प्रबन्धकहरू तपाइँसँग एक साझा भाषा फेला पार्नेछन्। जे भए पनि, हामी अंग्रेजी, फ्रान्सेली, इटालियन, टर्की, र अधिक जस्ता प्रमुख भाषाहरू बोल्दछौं।
हामी बुझ्दछौं कि तपाईको लक्ष्यहरु साकार गर्दा केहि बढी आवाज आउन सक्छ। तर हाम्रो सहायताका साथ तपाईले बोझ बोक्नु पर्दैन। हाम्रो विशेषज्ञहरु यी सबै गाह्रो काम सजिलो बनाउँछ। अन्तमा, हाम्रो उद्देश्य भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईं मात्र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर तपाईंको वेबसाइट शीर्षमा छ।
तपाईं आज हामीसँग किन दर्ता गर्नुहुन्न र अग्रणी टीमको हिस्सा हुनुहुनेछ !!!